Xog:Xagee ku dambeeyay Cabdicasiis Maxamed oo dhowaan baxsaday. | ogaden24
Xog:Xagee ku dambeeyay Cabdicasiis Maxamed oo dhowaan baxsaday.
Cabdicasiis Maxamed waxaa uu kamid ahaa dhagar-qabayaasha uu Horjoogaha maamulka Jigjiga kadhigtay Gacmaha uu dadka shacabka ah ee Ogadenia ku xasuuqa, waxaana mudooyinkii u dambeeyay soo kala dhex Galay shaki keenay inay kala Irdhoobaan.
Dhagarqabe Cabdicasiis oo xilal kala duwan soo qabtay ayaa ugu dambayn ahaa madaxa waxay ugu yeedheen xarunta iyo sidoo kale kuxigeen Cabdi iley, balse dhamaan wixii xil ahaa ee uu hayay ayaa laga xayuubiyay mudo haatan laga joogo 3-bilood, waxaa se Cabdicasiis Talo kucadaatay shirkii duleedka Qabridahar oo kamid ahaanshihii xisbigana lagaga caydhiyay.
Hadaba war aan kahelay ilo wareed kusugan magaalada Addis ababa ayaa sheegay in Cabdicasiis uu u baxsaday dalka Maraykanka, halkaasi oo Todobaadkan bilawgiisii uu kacaga dhigtay.
Xogta aanu helay ayaa sheegaysa in dhuumashada Cabdicasiis ay qayb kaqaateen xubno kamida kooxda EPRDF oo xidhiidh wanaagsan uu kala dhexeeyay, kuwaasi oo intii sida dhuumaalaysiga ah kujoogay Addis ababa iyagu Gacanta kuhayay.
Hadii warkani uu xaqiiq noqdo waxaa uu Cabdicasiis Qarka u saaran yahay inuu wajaho eedaymo laxidhiidha dambiyo uu kagalay shacabka Ogadenia oo isugu jira xasuuq xadhig wadareed iyo waliba xad Gudubyo kale oo Bini’aadminimada kadhan ah.